Maamulka Jubbaland & Wakiilka QM oo ka wada hadlay 16 kursi ee Gobolka Gedo | dayniiile.com
Home WARKII Maamulka Jubbaland & Wakiilka QM oo ka wada hadlay 16 kursi ee...
Maamulka Jubbaland & Wakiilka QM oo ka wada hadlay 16 kursi ee Gobolka Gedo
Madaxwayne ku-xigeenka Koowaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, ayaa shir ku qabsoomay habka fogaan aragga la yeeshay ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Waxaa shirka sido kale qeyb ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland iyo qaar kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee matala Gobolka Gedo, Waxaana kulanka diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira masiirka 16ka kursi ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland.
War kasoo baxay Xafiiska Madaxweyne kuxigeenka Koowaad ee Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in Kulanka uu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo guul sida ay sheegeen masuuliyiinta shirka ka qeybgashay.
Wararka Risaala ay ka heshay shirka ayaa sheegaya in Xubnaha ka socday Maamulka Jubbaland ay u sheegeen in Wakiilka QM in aan degmada Garbahaareey doorasho lagu qaban karin balse uu u sheegay in hal dhinac uusan go’aan ka gaari karin.
16 kursi ee taalla degmada Garbahaareey ee Gobolka Gedo ayaa kamid noqday caqabadaha heysta doorashooyinka, iyada oo Beesha Caalamka ay Maamulka Jubbaland iyo Villa Somalia ku cadaadinayaan inay xal ka gaaraan.
Previous articleGuddiga doorashooyinka Heer Federaal oo Xubno xal raadin ah Maanta u diraya Baydhabo
Next articleQarax lala eegtay Ciidamo Kenyan ah & khasaaro ka dhashay